Halyeeyga Frank de Boer oo kala taliyay Matthijs de Ligt kooxda ay haboon tahay inuu ku biiro Barcelona iyo PSG – Gool FM
Halyeeyga Frank de Boer oo kala taliyay Matthijs de Ligt kooxda ay haboon tahay inuu ku biiro Barcelona iyo PSG
(Yurub) 12 Juunyo 2019. Halyeeyga xulka qaranka Holand ee Frank de Boer ayaa kula taliyay xiddiga ay isku wadanka yihiin iyo kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt inuu ku biiro Barcelona inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Frank de Boer ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko 19 jirka reer Holland ee Matthijs de Ligt oo xiran maaliyada Barcelona, halka uu ka aadi lahaa kooxda Paris Saint-Germain.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay halyeeyga xulka qaranka Holand ee Frank de Boer waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Matthijs de Ligt waa ciyaaryahan u ciyaari kara koox kasta, waxaana ii fiicnaan lahayd aniga ahaan inaan arko isagoo u ciyaaraya Barcelona, sababtoo ah waxay heystaan falsafad la mid ah kooxda Ajax”.
“Wuxuu ku soo bilaabay kooxda Ajax isagoo 10 jir ah. Wuxuuna leeyahay falsafad iyo habka uu ugu ciyaari karo Barcelona”.
“Uma baahna wakhti uu kula qabsado kooxda Barcelona, wuxuuna diyaar u yahay inuu ciyaaro, waa daafac aad u fiican, marka uu kubadda heysto iyo marka ay ka maqan tahay”.
“Paris Saint-Germain waa koox aad u wanaagsan, waxay heysataa ciyaaryahano waaweyn, laakiin uma ciyaarto sida Matthijs de Ligt oo kale, haddii aad i waydiiso waxaa fiicnaan lahayd inaan ku arko midkood kooxaha Barcelona iyo Manchester City”.
“Kaliya hal arin ayaan kaga tagi doonaa kooxda Manchester City” - Guardiola